Forebright Capital ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု CCVUI.com Round တစ်ဦးက ငွေကြေး – Pandaily
Forebright Capital ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု CCVUI.com Round တစ်ဦးက ငွေကြေး
Jan 07, 2022, 21:37ညနေ 2022/01/08 02:34:35 Pandaily
CCVUI.com သည် မကြာသေးမီက ကြေငြာ ခဲ့သည်ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ တန် သော Round A ငွေကြေး ပြီးစီး ခြင်း. Forebright Capital ကို တစ်ဦး တည်း သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ ဖြစ်ပါသည်, Geyang Capital ကို တစ်ဦး တည်း သာ ဘဏ္ဍာရေး အကြံပေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရန်ပုံ ငွေများကို R & D နှင့်နည်းပညာ အဖွဲ့များ အားကောင်း လာ စေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ ချစ်ပ် များ အဆင့်မြှင့်တင် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
စက်တင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, CCVUI.com အသိဉာဏ် မိန့်ခွန်း အသိအမှတ်ပြုမှု AI ချစ်ပ် များနှင့် algorithms ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စေ့စပ်, Self-ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း အာရုံကြောကွန်ယက် အင်ဂျင် အပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန် များသည် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မား ခြင်း၊ အလွန် နိမ့်သော စွမ်းအင်သုံးစွဲ မှု၊ မြင့်မားသော အသိအမှတ်ပြု မှုနှုန်း၊ စျေးနှုန်း ချိုသာ မှု၊ ခိုင်မာသည့် algorithm အပေါ်တွင် ကျွမ်းကျင် ပိုင် နိုင်မှု စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်း များ၊ နားကြပ် များနှင့်အခြား အမျိုးအစား များအတွက် သင့်တော်သည်။
၎င်း၏ ထုတ်ကုန် XS200X သည် စွမ်းအင် နိမ့်သော အသံ ချစ်ပ် ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း ချစ်ပ် ကို ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိ ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထူး မိန့်ခွန်း အသိအမှတ်ပြု front-end ချစ်ပ် သည် RISC-V ဗိသုကာ အပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည် ယခင် အလွန် နိမ့်သော စွမ်းအင် ADC နှင့်စွမ်းအင် နိမ့် အဆင့်-သော့ခတ် ကွင်းဆက် စနစ်များ ၏ဒီဇိုင်း ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြ problems နာ များ ကိုဖြေရှင်း ပေးသည်။ ၎င်း ချစ်ပ် တွင် စွမ်းအင် နိမ့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ် ဒီဇိုင်းနှင့် သေးငယ်သော ထုပ်ပိုး မှု တို့ပါ ၀ င်သည်။
လေး နှစ်တာကာလအတွင်း အဓိက အဖွဲ့သည် RISC-V ဗိသုကာ အပေါ် အခြေခံ၍ ချစ်ပ် ဖြေရှင်းချက် တစ်ခု ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည် ကုန်ကျစရိတ် ထိန်းချုပ် ခြင်း နှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ များ ကိုထပ်မံ ဖြည့်ဆည်း နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် စျေးကွက် သည် တစ်သားတည်းဖြစ်တည် မှု မြင့်မားပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ချစ်ပ် များသည် RISC-V ဗိသုကာ နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲ မှု၊ ကွန်ပျူတာ စွမ်းအား နှင့် ထုတ်ကုန် စွမ်းဆောင်ရည် တို့၏ ရှေ့နောက် ညီညွတ်မှု တို့ဖြင့် ထင်ရှားသည်။
စီးပွားရေး အရ CCVUI.com တွင် ဌာန ၄ ခုရှိသည်။ ခရီးသွား ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်း၊ အသံ ပုံနှိပ် ခြင်း သော့ဖွင့် ခြင်းနှင့် အသံ အရင်းအမြစ် တည်နေရာ ။ ကဏ္ each တစ်ခုချင်းစီ သည်အခြား ကဏ္ with များ နှင့်ဆက်သွယ် နိုင်ရန်အတွက် ကဏ္ each တစ်ခုစီသည် အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ခရီးသွား ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်းသည် စမတ် သံခမောက် ဈေးကွက် အတွက်အဓိက ဖြစ်သည်။ CCVui.com သည် မြင်းစီးသူရဲ များအတွက် စမတ် ဦး ထုပ် များ ထုတ်လုပ်ရန် ele.me ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီ များနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင် နေသည်။ ယာဉ်မောင်း များအနေဖြင့် အမှာစာ များကို ကိုယ်တိုင် ပြီးမြောက် စေရန်နှင့် ဖုန်း ခေါ်ဆိုမှု များကိုလည်း ဖြေဆို ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် တိုက်ရိုက် နှင့် ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့် ခေါ်ဆို မှုများအတွက် အသံ အရင်းအမြစ် တည်နေရာ ကိုအကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Manji Technology သည် ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး ရန်ပုံငွေ ရရှိခဲ့ပြီး Yun Qi ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကို ဦး ဆောင် ခဲ့သည်
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် CCVUI.com သည် authentication နှင့် assisted unlock ကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် offline voiceprint အသိအမှတ်ပြုမှု ကိုမြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက် မည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် စမတ် ခမောက် များ၊ လမ်းလျှောက် စကားပြော စက် များနှင့်အခြား အရာ များအတွက် သန်း နှင့်ချီ သော ချစ်ပ် များကို ကမ္ဘာအနှံ့ သို့တင်ပို့ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Tags Artificial Intelligence | Chips | financing | smartphones
Ccvui.com recently announced the completion of its A-round financing worth tens of millions yuan. Forebright Capital was the exclusive investor for this round while Geyang Capital was the exclusive financial consultant.
Startups Jan 07 ဇန်နဝါရီ 8, 2022
Forebright ক্যাপিটাল বিনিয়োগ CCVUI.com একটি বৃত্তাকার অর্থায়ন
CCVUI.com সম্প্রতি তার একটি বৃত্তাকার অর্থায়ন সম্পন্ন ঘোষণা করেছে যা লক্ষ লক্ষ ইউয়ান মূল্য রয়েছে। Forebright ক্যাপিটাল এই বৃত্তাকার একচেটিয়া বিনিয়োগকারী, এবং Gaoyang ক্যাপিটাল একটি একচেটিয়া আর্থিক উপদেষ্টা হয়।